Tag: Weebly uye Mwenje Mwenje | Martech Zone
Tag: Weebly uye Mwenje Mwenje
Chitatu, Ndira 9, 2019 Chitatu, Ndira 9, 2019 Douglas Karr
Humbowo hwehukama hwakakosha apo vatengi vari kuita sarudzo yekutenga pane yako ecommerce saiti. Vashanyi vanoda kuziva kuti yako saiti inovimbwa uye kuti vamwe vanhu vari kutenga kubva kwauri. Zvakawandisa nguva, ecommerce saiti inogara yakamira uye wongororo dzakashata uye dzekare ... zvichikanganisa zvisarudzo zvitsva zvemutengi. Chimwe chinhu chaunogona kuwedzera, chaizvo, mumaminetsi mashoma iSales Pop. Iyi ndiyo yepasi kuruboshwe popup inokuudza iwe